Office File (Excel, Word) Repair Software လိုချင်လို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
Office File (Excel, Word) Repair Software လိုချင်လို့ပါ။
February 2014 in DTP
Excel, Word တွေ Damage ဖြစ်ရင် ပြင်လို့ရတဲ့ Repair Software လိုချင်ပါတယ်။
Online မှာလဲ Key , Crack တွေရှာလို့မရ။ အပြင်ဆိုင်တွေကနေလဲ ၀ယ်လို့မရလို့ပါ။
ရှိတဲ့သူများ မျှဝေပေးကြပါဦးခင်ဗျ။ >-
word , excel က ဘယ် version လဲ မသိဘူး ? .docx ဖွင့် မရတုန်းကတော့ ကျွန်တော် notepage++ နဲ့ ကောက်ဖွင့်ပြီး အထဲက စာတွေတော့ ပြန်ယူလို့ ရတယ်။ format တော့ ပြန်မရဘူးပေါ့။
2007 version ပါပဲ။ excel file တွေကို NAS ထဲမှာထားတာ။ ရုံးကနိုင်ငံခြားသားက အဲဒီဖိုင်တွေကို Network ကနေတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်တာ။ စက်ထဲမှာထားပြီးလုပ်ပါဆိုတာလဲပြောမရဘူး။ Network ကနေ တိုက်ရိုက်လုပ်တော့ ဖိုင်တွေက ခဏခဏပျက်ရော။ NAS ကလဲ D-Link DNS 320L လေးပဲသုံးထားတာ။ မြန်မာပြည်မှာလဲ အဲဒီအမျိုးပဲတွေ့တယ်။ . အဲဒါကြောင့် excel repair software လိုချင်တာ။ Online မှာရှာတော့ OfficeFix / ExcelFix software တွေ့တယ်။ စမ်းသုံးကြည့်တော့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ Demo Version ပဲပေးတော့ save လုပ်လို့မရဘူး။ :P . Serial / Crack လဲ ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့လို့ ဒီမှာလာအော်တာ။ ကူပြီးပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါ စိုင်းစိုင်းစေတန် ..